Deg-deg: Nin soomaali ah oo daqiiqado kahor sadex qof ku dhaawacay Sarsborg. - NorSom News
Deg-deg: Nin soomaali ah oo daqiiqado kahor sadex qof ku dhaawacay Sarsborg.
Sida ay daqiiqado kahor noo xaqiijiyeen masuuliyiin katirsan jaaliyada soomaaliyeed ee Sarborg, nin soomaali ah oo maskax ahaan u yara xanuunsanaa, ayaa caawa sadex qof oo dumar ah toori ku dhaawacay magaalada Sarsborg.
Labo kamid ah dadka dhaawaca ah ayay boolisku xaqiijiyeen in dhaawacoodu uu yahay mid daran.
Sidoo kale labo qof oo kamid ah sadexda qof ee ninkan uu dhaawacay, ayaa naloo sheegay inay yihiin soomaali.
Guud ahaan Warbaahinta Norway ayaa dhacdadan caawa aad u hadalheyso, iyada oo boolis tiro badan ay caawa gaaf-wareegayaan magaalada Sarsborg, waxaana ay boolisku dadka ka codsadeen inay ka dheeraadaan aaga uu wax ka dhacay.
Wixii kusoo kordho dib ayaan kasoo galin doonaa.
Previous articleKawaran hadii xaaskaagu ay TV ka qirato inay gogoldhaaf sameysay?, Waliba wiil 21 sano ka yar ay la sameysay?
Next articleIsbitaalka: Mid kamid ah dumarkii uu ninka soomaaliga dhaawacay oo isbitaalka ku geeriyootay.